Farmaajo oo taageero dhaqaale weeydiistay Ururka Jaamacadda Carabta - Awdinle Online
Farmaajo oo taageero dhaqaale weeydiistay Ururka Jaamacadda Carabta
Ilo-wareed ka tirsan Xoghaynta Ururka Jaamacadda Carabta ayaa waxay xaqiijiyeen in Madaxweyne Farmaajo uu mar kale Dhambaal u soo diray Xoghayaha Guud ee Ururka Jamaacadda Carabta, Axmed Abu Kheyd oo uu kaga codsaday Taageero Dhaqaale ee xilligan xasaasiga u ah Somalia.
Wasiirka Arrimaha Dibedda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Somalia, Maxamed C/risaaq Maxamuud Abuukar oo maalmahan booqasho hawleed ku jooga Qaahira waxa uu Xoghayaha Guud ee Ururka Jaamacadda Carabta shalay u gudbiyey farriin salaan ah oo uu uga waday Madaxweyne Farmaajo.
Dhambaalkaasi ayaa waxa lagu xusay inay DFS ka mahad-celinayso Tagaeerada ay Dowladaha xubnaha ka ah Ururka Jamaacadda Carabta u fidiyaan DFS, Hay’adaha hoos-taga iyo Ummadda Soomaaliyeed.
Farriinta Madaxweyne Farmaajo u diray Xoghayaha Guud ee Ururka Jamaacadda Carabta waxa uu ku booriyey in la sii kordhiyo Taageeradda Carabta siiyaan Somalia, gaar ahaan Xilligan xasaasiga ee dadaalka Kal-guurka.
Previous articleGuddoomiyaha Aqalka Sare oo sheegay in loo diiday ka qeyb-galka shirarka doorashada
Next articleQaraxyo lala eegtay Ciidamo ka tirsan AMISOM & khasaaro ka dhashay